Ọkachamara Semalt: SEO Dị Mfe Dịka ABC
Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịga nke ọma n'Ịntanet site na ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ dị irè na usoro mgbasa ozi dijitalụ . A ghaghị inwe ụfọdụ ụzọ SEO na-eme ka ndị ahịa gị mara ika ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Ahịa ahịa ahịa na-achọ ime ka aha ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ nọrọ n'ihu ndị ahịa ha - create your free. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị nna weebụ na-eji usoro dịka ahịa ọdịnaya . Usoro ndị a nwere ụfọdụ ụzọ ahịa ahịa mgbasa ozi nke na-achọsi ike na njikarịcha search engine.
SEO na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ mara na netwọk search . Otu n'ime ụzọ kachasị dị irè nke ịbawanye ọhụụ nke ebe nrụọrụ weebụ n'ime usoro ọchụchọ nwere ike ịgụnye ndị ọkachamara na-agba ụgwọ ma ọ bụ SEO ụlọ ọrụ iji rụọ ọrụ maka gị. Otú ọ dị, ịmụta usoro dum nwere ike ịdị mkpa karịsịa iji rụọ ọrụ ụfọdụ nke SEO automation tools.
Ụfọdụ n'ime isi ihe ndị dị na SEO dị na nduzi a nke Oliver King, onye ọrụ ahịa Success Manager nke Semalt .
SEO na-agụnye ịchọ mkpụrụokwu kapịrị ọnụ nke nwere oke nyocha dị elu. N'iji okwu mkpokọta nwere oke ọchụchọ choro imeputa na weebụsaịtị ha abia na ndepụta mgbe onye nyocha choro isi okwu. N'otu oge ahụ, isiokwu ndị dị ogologo ọdụ kwesịrị inwe asọmpi na-adịghị ike iji nwee ike ịpụ onye na-asọmpi gị na ụlọ ọrụ weebụ niile. Ị nwere ike iji ụfọdụ ngwaọrụ dịka ngwá ọrụ Moz ma ọ bụ SEMRush. Ndị ọkachamara ụfọdụ nwere ike ịgwa onye ọchụnta ego ka ọ jiri Google AdWords, nke bụ ngwá ọrụ bara uru na nyocha ọchụchọ.
Mgbe ịchọtare isiokwu ndị kwesịrị ekwesị, ọ dị mkpa iji mepụta ọdịnaya dị mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Ebumnuche ndị ahụ kwesịrị ịkọwa aha, peeji nke meta nkọwa yana ọdịnaya n'onwe ya. Ndị na-elekọta weebụ na-akwado ọdịnaya dị elu nke dị mkpa maka nyocha gị. Ihe dị mkpa bụ ọdịnaya dị elu nke Google na-eji na-ebute weebụsaịtị na SERP nke ụfọdụ amaokwu ọchụchọ.
Mgbe ịchọtachara ọdịnaya gị, ị nwere ike ịnweta ikike na ngalaba gị. Akụkụ a nwere ike ịpụta site na àgwà nke backlinks nke na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị. Enwere ike ime ụfọdụ na-eso ma ọ bụ njikọ ndị na-esoteghi. Ihe dị mkpa mgbe azụ azụ na-agafe ihe ọṅụṅụ njikọ. Ọzọkwa, ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike inwe uru ọ bụla mgbe ị na-ekekọrịta okporo ụzọ dị ka ọ bụrụ na ị na-eziga ndị ọbịa. Ndị ahịa a nwere ike ịnọgide na-enwe mmekọrịta dị ogologo na ụlọ ọrụ gị.
Ụlọ ahịa azụmahịa e-azụmahịa kachasị mma emepụtala ebe nrụọrụ weebụ bara uru iji mee ka ahịa ịntanetị nwee ọganihu. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ ga-enwe ike ịchọta ọtụtụ nde ndị ahịa n'Ịntanet site na otu ebe ịntanetị. Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta na-achọ ime ka saịtị weebụ nwee uru site n'inweta akụkụ dị ịrịba ama nke okporo ụzọ na-achọ ụfọdụ okwu ọchụchọ. Site na ngwa ngwa nke usoro SEO, ọ ga-ekwe omume iji hụ na ndị ahịa na-enwe ọganihu, yana uru dị ogologo nke ịzụ ahịa ahịa ịntanetị na-eme ka usoro ahụ dum bụrụ ihe ịga nke ọma. Ị nwere ike iji nduzi SEO a mee ka ị banye n'usoro a.